Izigaba Zokuqeqesha Nezifundo
En Ukwakheka nezifundo Sibhekana nenqwaba yezihloko ezihlobene nemfundo futhi ngenhloso yokukusiza kwinqubo yakho yokuqeqesha ukuthola indlela yokuphuma emhlabeni womsebenzi. Ngezansi uzothola zonke izindatshana esizenzile sonke lesi sikhathi ebesikade sinayo nale webhusayithi. Sinesigaba sezivivinyo zokuncintisana, lapho uzothola khona imininingwane enemininingwane eminingi futhi evuselelwe kunani elikhulu lamagatsha ahlukene.
Siphinde sibe nesigaba sezindaba, nemincintiswano yakamuva nemicimbi engaba nentshisekelo kuwe, kanye nezindaba zakamuva zokuqeqeshwa, ezibhalwe yi-Amazing yethu ithimba lokuhlela. Uma ufuna okuthile okukhethekile futhi ungakutholi lapha, ungasebenzisa injini yokusesha.
IHerramientas de estudio
Izimpi zombuso wezokuphepha
Ukuphikisa koMkhandlu Wesifundazwe
Ukuphikiswa Kwabavikeli Bomphakathi
Ukuphikiswa Kwamaphoyisa Endawo
Ukuphikiswa Kwamaphoyisa Kazwelonke
Izinkundla zabafundi nemiphakathi